Ny toetoetran'ny fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia ny toe-piainana ara-pihetseham-po ara-pihetseham-po sy ara-batana eo amin'ny zaza, ny fananana ny toetrany. Matetika ny olon-dehibe no manentana ankizy, miankina amin'ny traikefany manokana, fahatsiarovan'ny fahazazana ary ny fisainana, izay tsy tena marina. Ny zava-misy dia ny fialan-tsasatry ny fianaram - pianakaviana dia mety hanana voka-dratsy tsy ampoizina.
Inona no mamaritra ny toetra mampiavaka ny fianaram-pianakaviana?
Matetika dia lasa olana lehibe ho an'ny ray aman-dreny ny fanabeazana ankizy iray. Maro ny fandraràna na fahazoan-dàlana, famporisihana na fanasaziana, fiambenana tafahoatra na tsy firaharahiana - ireo sy ireo lohahevitra mampiady hevitra hafa dia mahalana no mahita toerana iombonana na mitarika ho amin'ny tsy fisian'ny fitsipika tokana entin'ny fianaram-pianakaviana. Ary amin'ny voalohany, ny ankizy dia mijaly amin'ny "politika" toy izany.
Tsy isalasalana, ny fomba fanabeazana dia misy fiantraikany amin'ny toetran'ny fifandraisana eo amin'ny olon-dehibe, ny traikefa sy ny lovam-pianakaviana tamin'ny taranaka teo aloha, ary ireo antony maro hafa. Ary, indrisy fa tsy ny ray aman-dreny rehetra no mahafantatra fa ny fitondran-tenany amin'ny ho avy dia mety hiteraka fahasimbana tsy azo havaozina amin'ny fahasalaman'ny zaza, ary koa manasarotra ny fiainany eo amin'ny fiarahamonina.
Ny psikology sy ny mpampianatra dia manavaka ny endrika fototra efatra amin'ny fampianarana momba ny fianakaviana, izay samy manana ny mpanohana azy avokoa.
Inona avy ireo fomba fampianarana fianaram-pianakaviana?
Raha ny fijerena ny psikology, dia ny demokrasia no fomba fanehoana fankasitrahana indrindra amin'ny fianaram-pianakaviana. Ny fifandraisana toy izany dia mifototra amin'ny fahatokisan-tena sy fahatakarana. Ny ray aman-dreny dia manandrana mihaino ny fangatahana sy ny fanirian'ny zazakely, ary mamporisika ny andraikitra sy ny fahaleovan-tena.
Ao amin'ny fianakaviana toy izany, amin'ny laharam-pahamehana amin'ny soatoavina sy tombontsoa iombonana, ny fomban-drazana, ny filana ara-pihetseham-po.
Sarotra kokoa ho an'ireo ankizy ao amin'ny fianakaviana ny manana fomba ambaran'ny mpanoratra . Amin'ity tranga ity, ny olon-dehibe dia tsy manandrana manohitra ny fangatahan'izy ireo, na ny fepetra takiana sy ny fandrarana. Araka ny hevitr'izy ireo, tokony hankatò tanteraka ny sitrapony tsy misy fepetra ny ankizy, ary raha tsy izany dia hananatra mafy ny fanaratsiana na fanasaziana ara-batana. Ny fihetsika manerantany dia mahalana dia manampy amin'ny fananganana fifandraisana akaiky sy azo itokisana. Na dia efa antitra aza ireo zaza ireo dia misy fahatsapana tahotra na fahatsapana ho meloka, fahatsapana tsy tapaka ny fanaraha-maso ivelany. Fa raha afaka manalavitra ilay fanjakana mampahory ny ankizy, dia mety ho lasa tsy tia manavakavaka ny fitondran-tenany. Misy ireo tranga izay tsy afaka manohitra ny fanerena tsy tapaka amin'ireo ray aman-dreny mpanao didy jadona, mamono tena ny ankizy.
Ny fanabeazana mahafinaritra ny fianarana dia ny hafa faran'izay henjana, izay misy tsy misy famerana sy fandrarana. Matetika, ny fihetsika mankamamy dia vokatry ny tsy fahafahana na ny tsy fahavitrihan'ny ray aman-dreny mba hametraka fitsipi-pitondran-tena sasany. Ny fitsipi-panabeazana toy izany dia azo raisina ho toy ny tsy firaharahiana sy tsy firaharahan'ny ankizy amin'ny olon-dehibe. Amin'ny ho avy, dia hitarika amin'ny fananganana olona tsy tompon'andraikitra izany, ka tsy afaka mampihatra ny fahatsapana sy ny mahaliana ny hafa. Mandritra izany fotoana izany, ireo ankizy ireo dia miaina tahotra sy tsy fandriampahalemana amin'ny fahaiza-manaony.
Maro ny fahadisoana sy ny voka-dratsiny manana hyperope . Ao amin'ny fianakaviana toy izany, ny ray aman-dreny dia mahafeno tanteraka ny loha rehetra amin'ny zanany, raha tsy misy lalàna sy fameperana izany. Ny vokatr'ity fitondran-tena ity dia toetra maha-te-ho tia tena sy feno fihetseham-po, izay tsy voavaha ny aina eo amin'ny fiarahamonina.
Ny fahadisoana iraisan'ny fianaram-pianakaviana dia ny tsy fisian'ny politika tokana, rehefa tsy mitovy ny fitsipika sy ny fepetra takiana amin'ny reny sy ny dadany, na miankina amin'ny toe-tsaina, ny fahasambaran'ny ray aman-dreny.
Toy ny Santa Claus amin'ny tanany
Lalao ho an'ny famoriam-bahoaka ataon'ny ankizy
Children of Prince William sy Kate Middleton
Fitaovana avy amin'ny fitaovana voajanahary ho an'ny sekoly fanabeazana fototra
Ahoana no fomba ampianarana ankizy iray hamaky haingana sy araka ny tokony ho izy?
Fitaovam-pirazanana zaza kamboty
Ahoana ny fikajiana ny fanomezana alalana amin'ny fitaizan-janaka?
Torohevitra ho an'ny ray aman-dreny any am-pianarana
Taom-baovao amin'ny tananao amin'ny kilasy jadona
Fitaovam-piadiana avy amin'ny grika
Ireo jirom-behivavy manify
Natalie Portman dia nanohana ny vadiny tao amin'ny LA Dance Project Gala tany Los Angeles
Sakafo izay hitsiky ny rehetra
Fanazaran-tena ho an'ny fehikibo
Trends ny fahavaratra 2013
Lapan'ny Mpizaha tany Petrovsky any Moskoa
Ny magnesia ho an'ny fahavoazana dia ny tombontsoa sy ny fahasimbana amin'ny fomba
Asthenika syndrome - inona izany ary ahoana no fomba itondrany azy?
Ny biography Brigitte Macron - ny lalana avy amin'ny mpampianatra amin'ny vehivavy voalohany
Ny taombaovao amin'ny tranon'ny firenena iray
Cookies «Ireo rantsan-tànan'ny mpamosavy» - fitsaboana tsara amin'ny Halloween
Cream of currant
Ahoana no hanaovana aviary ho an'ny alika?